इभेन्ट Archives - Page 48 of 53 - Purbeli News
काठमाण्डाै । सन् २००२ मा रुपन्देहीको रुद्रपूरमा जन्मेकी तेरिया फौजा मगरले भारतको चर्चित रियालिटी सो झलक देखला जा सिजन ९ को उपाधी हात पारेपछि थप चर्चामा छिन् । तेरियाले भारतमा मात्रै हैन आफ्नो कलाबाट विश्वमै नेपालको शान बढाएको भन्दै धेरै नेपाली गर्व गरेका छन् । त्यस्तै उनको परिवार पनि तेरिया जस्तो सन्तान पाएर निकै खुशी छ । तेरियासँगै झलकमा पुगेक...
अमिर खानको सेक्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल: श्रीमती तनावमा
एजेन्सी / पाकिस्तानी मुलका बेलायती बक्सर आमिर खानको सेक्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको वैवाहिक जीवन संकटमा परेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । पाकिस्तानी मुलका आमिरको महिला बक्सरसँग स्काइप च्याटमा अश्लिल हर्कत गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । आमिरले लण्डन ओलम्पिकमा बेलायतलाई रजत पदक दिलाएका थिए । से...
अाफै माथी छानबिन गर्नुस भन्दै दिपक र दिपाले दिए प्रहरीमा उजुरी : कारण यस्ताे छ !
काठमाडौं। आफैंमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलासहित फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ निर्माण समूहले गौशालाको महानगरीय प्रहरी वृत्तमा शनिबार निवेदन दर्ता गराएको छ । नवलपरासी स्थायी घर भई काठमाडौंको सिनामंगलमा बस्दै आएका कृष्ण सुवेदीले छक्का पञ्जा पाइरेसीम संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि गत पुस २८ गते ‘रहस्यम...
काठमाडौं । थिएटर मल नाटकघर यसपटक अस्पताल बनेको छ । थिएटर मलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको नाटक ‘बेड नं. ९९’ ले नाटकघरलाई अस्पतालको रुप दिएको हो । माघ ७ शुक्रबार प्रिमियर गरिएको नाटक ‘बेड नं ९९’ महेशविक्रम शाहको कथालाई घनश्याम श्रेष्ठले नाटको रुप दिएका हुन् । मनोवैज्ञानिक शिल्पमा पोख्त कथाकार शाहको यस कथालाई नाटकमा पनि निर्देशक श्रेष्ठले मनोवैज्ञानिक ...
काठमाडौं, २ माघ । झापाको विर्तामोडमा एनसेलले एउटा कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चर्चित गायक यम बुद्ध अर्थात अनिल अधिकारी पनि गए । करिब १२ बजेको थियो उनको मोबाइलमा घरबाट फोन आयो,‘हजुर आमा बित्नुभयो ।’ यो खबरले स्तब्ध बनेका अनिल घर पुगे तर, घरबाट बुवाले ‘म सम्हाल्छु तिमी जाउ’ भनेपछि कार्यक्रममा फर्किए । तर, उनले त्यो कार्यक्...
काठमाडौँ, १७ पुस । रङ्गकर्मी एवम् कलाकार विष्णुभक्त फुयाँलको हृदयघातका कारण आज ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक ‘महर्षि याज्ञबल्कय’ मा अभिनय गर्दागर्दै स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका क्रममा उहाँको निधन भएको हो । दुई घन्टाको सो नाटक सुरुवात भएको डेढ घन्टा पुगेपछि एक्कासि नाटक गर्दागर्दै बेहोस भई फुयाँल ढलेपछि तत्कालै वीर अस्...
यस्तो रहेछ दीपाश्रीले विहे नगर्नुको कारण
काठमाडौं । दीपाश्री दिपकराजलाई स–सानो कुरामा केयर गर्छिन् । दिपकराजले पनि उसरी नै केयर गर्छन् । हिजोआज त पशुपतिको डाँडामा ध्यान गर्न पनि एकाबिहानै सँगै पुग्छन् । उनीहरुको मित्रताको डोरी निकै बलियोसँग गाँसिएको छ । कतिबेला को कहाँ छन् भनेर अपडेट भइरहेका हुन्छन् उनीहरु । यति लामो समयम्म सम्बन्ध टिकिराख्नुको कारण बताउँछन् दीपकराज, ‘एक त हामी लेडिज जेन्...
संगीतको दुनियाँमा नयाँ कोसेलीको साथमा सृजनको आगमन
मलेसिया । नेपालको पुर्वी एक्दमै विकट जिला सोलुखुम्बु को बुङ गा.बि.स मा जन्मिएका सृजन कुलुङ राई सानैदेखि फरक स्वभावका थिए । साधारण परिवार मा जन्मेका उनि सानै देखि चित्र कोर्न र गीत सुन्न अनि फिल्म सम्बन्धिका कुराहरूमा सौखिन थिए । दु:खहरु त धेरै झेले कम्जोर पारिवारिक आय आस्था भएका उनी कहिले बिदेशीको भारी बोकेर सगरमाथा आधार सिबिर तिर हुन्थे त कहिले ...
कलाकारलाई प्रकृति नै स्वर्ग
काठमाडौँ । भूकम्पले थिल्थिलिएको रसुवा जिल्लाको प्रकृतिलाई कलाकारले चित्रकला र मूर्तिकलाका माध्यमबाट उतारेका छन् । वन्यजन्तु पीडित उद्धार कोषले गत कात्तिक २२ देखि मङ्सिर २२ गतेसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी ३५ चित्रकार तथा मूर्तिकारलाई रसुवा जिल्लाका धुन्चे, स्याफ्रुबेंसी, भार्खु, लाङटाङ, गोसाइँकुण्डमा त्यहाँको जनजीवन, पशुपक्षी, हिमाल र ताललाई कलामा अ...
हङ्कङ /हङ्कङ गजल तथा भजन साँझमा सदावहार गायक आनन्द कार्कीले आफ्ना चर्चित गितहरु मार्फत भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका छन् । देशभक्ति गित गाउँदै स्टेजमा प्रवेश गरेका कार्कीले ‘लाग्छ मन हेरि रहुँ’, ‘म तिमी बिना मरिहाल्छु नी’, ‘भाकेर बरपिपलु’, ‘बनमा फुल्यो फुल’ लगायत दर्जन बढि चर्चित गितहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा पत्रकार तथा हाँस्य कलाकार...